စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 50% ဦးဝင်း Boost | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 50% ဦးဝင်း Boost | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 50% ဦးဝင်း Boost
2.This bonus will be active between 2nd – 8th February 2017 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်.
4.အမြတ်နှင့်အရှုံးသာ (: P&L ကို) on selected slot games, က Superman, အဆိုပါ Batman, Justice League and The Green Lantern between 00:00 & 23:59 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်) on the day of the promotion will count towards qualification for the Boost.
5.အဆိုပါ Boost အသားတင်အမြတ်အညီချီးမြှင့်ကြလိမ့်မည် (စစ်မှန်သောပိုက်ဆံအနိုင်ရရှိ) on selected slots. ကြောင်းကိုသင်၏ပိုက်ကွန်ကို P ကို​​ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်&L ကိုအနိုင်ရရှိအတွက်£ 10 နိမ့်ဆုံးရရှိခဲ့သည်, သငျသညျမှာတွက်ချက်တစ်ဦးထပ်တိုးဦးမည် 50% of your gross P&L ကို.
6.In order to be eligible for the Win Boost, players must have madeaminimum deposit of £10 on the day of the promotion and wagered on Superman, အဆိုပါ Batman, Justice League and The Green Lantern.
9.ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေကနေအများဆုံးကူးပြောင်းငွေပမာဏ 4X မှာချီးမြှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုမိနစ်မှာပါလိမ့်မည်. အာမခံပြီးပြည့်စုံသည်တစ်ချိန်ကအပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုအလိုအလျှောက်ပြောင်း.
10.ဒီမြှင့်တင်ရေးထံမှရရှိခဲ့ပြီးအပိုဆုရန်ပုံငွေများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ slot ကဂိမ်းပေါ်မှာကစားရန်သာအသုံးပွုနိုငျ.
12.ထိုအာမခံမီကရန်ပုံငွေဆုတ်ခွာပြီးပြည့်စုံသည်အကောင့်အားလုံးကိုဆုကြေးငွေနှင့်ဤ attribute ရဲ့ဆိုအနိုင်ရရှိကိုပယ်လိမ့်မည်.
13.Bonuses can take up to3သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့မြှင့်တင်ရေးရဲ့အဆုံးကနေအလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံး.
14.ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေများအတွက်တရားဝင်နေဆဲအသိအမှတ်ပြု 28 နေ့ရကျ. သငျသညျဤကာလအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်မထားသင့်, ကျန်ရှိသောဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများကိုသင့်အကောင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည်.
15.ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်မှာတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “ငါ့အကောင့်” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆုကြေးငွေတန်းစီကြည့်ရှုရန်အပိုင်း
16.စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, မဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ (သိ. သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို) မည်သည့်အချိန်တွင်နှင့်ကြိုတင်သတိပေးချက်မပါဘဲ.
17.ယေဘုယျ စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ လျှောက်ထား. စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိစ္စများတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်.
Terms and conditions of 50% ဦးဝင်း£ 100 အထိတက် Boost
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 20% ဦးဝင်း Daily သတင်းစာ Boost